Home Wararka Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika
Sida ay qorayaan Wargaysyada Koonfur Afrika, Dhac ganacsi oo ka dhacay deegaanka Vrygrond oo ku dhow Xeebta Muizenberg ee Magaalada Cape Town, ayaa waxaa ku dhintay 31 jir Soomaali ah, kaas oo dhowr jeer Middi ku dhufteen burcad weerartay.
Afhayeenka Booliiska, Joseph Swartbooi, ayaa sheegay in Booliska Muizenberg ay tageen goobta Vrygrond Avenue saacadu markay ahayd 3:45 galabnimo ee isniinta, ayna heleen Maydka Muwaadinka oo ay dadka deegaanku u yaqaaneyn Suleymaan.
“Markii ay yimaadeen goobta fal-dembiyeedka ee Vrygrond Avenue, waxay heleen meydka nin 31 jir ah oo jirkiisa dhaawac ka soo gaaray. “Dhibanaha ayaa shaqaalaha caafimaadku sheegeen inuu goobta ku dhintay.
“Sida ay sheegayaan wararka, laba tuhmane oo aan la garanayn ayaa soo galay dhismaha, iyagoo Tooriyeeyey Marxuunka, ka dibna waxay goobta uga baxsadeen jihada aan la sheegin iyagoo wata Cadad Lacageed oo aan cadadkeeda la sheegin oo laga soo qaatay goobta dembiga welina lama qaban,” ayuu yiri Swartbooi.
Wargayska Daily Voice ay booqday dukaanka, saddex nin oo shaqaale ah ayaa ku jiray albaab xiran, iyagoo aad u argagaxsan, waxayna diideen inay ka hadlaan dhacdada.
Nin 34 jir ah oo ka mid ah dadka deegaanka oo naxsan ayaa yiri: “Anaga oo taagan wadada hareeraheeda ayaa waxaan aragnay labada nin oo soo galay dukaanka ka dibna waxaan aragnay iyaga oo mar kale la soo cararay boorso….Ka dib markii ay carareen, waxaan maqalnay qof qaylinaya, ka dibna waxaan aragnay Sulaymaan oo dhulka jiifa”.
Si kastaba dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa dilal, dhac iyo boob loogu geystaan Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaas ku leh goobaha Ganacsi, mana jirto cid iska xirtay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysanayo Muwaadiniinta Soomaalida.